China Camping Stove Yakakura Mvura Tangi Inokodzera Chimney Mugadziri uye Mutengesi | Ndarama yegoridhe
Double View Wood Chitofu Neovheni
Wood Burner Heater Ine Inotakurika BBQ Grill
Akanakisa Wood Kupisa Chitofu NeGrill
Yakasarudzika Simbi Moto Makomba Ari Kutengeswa
Kunze Chitofu Chemoto Nehovhoni Yekuseri Kwemba
Kunze Kwehuni Kupisa Chitofu Chekubika
Yemazuva Ano Wood Kupisa Chitofu NePizza Ovhheni
Bindu Rinoshandiswa Pellet Wood Stove Yekupisa
Camping Stove Huru Yemvura Tangi Inokodzera Chimbini
- Flash kupisa: Iri tangi rinosimudza mvura iyo inogona kufashaidzwa mumaminetsi apo chitofu chiri kupisa.
- Yakareruka yekushandisa musasa: Ungave uri kungoita mukombe wetii kana kusungunuka chando nechando chemvura yekunwa, tangi remvura inopisa rinogona kukwidziridza kambi yako yekunyaradza kune imwe nhanho.
- Govera nzvimbo dzekumisikidza sarudzo: Inopa nzvimbo mbiri dzakasiyana dzekuisa-pamusoro pekubika pamusoro pekubikira uye padivi pechitofu muviri wechinzvimbo chekudziya.
- Faucet dhizaini: Yakabatanidzwa spigot inoita kuti zvive nyore kuzadza mukombe kana kusuka bheseni nemvura inopisa
- Yakasimba sevhisi: Yakagadzirwa yemhando yepamusoro simbi isina chinhu nekutakura mubato. iyo haizombo ngura kana kupara, inokodzera munzvimbo dzakaomarara dzekunze.
Zvinhu: 304 Stainless Simbi
Saizi: 300 * 300 * 425mm
Kurema: 5.5 makirogiramu
MOQ: Seti zana
Nguva Yekugadzira: Mazuva makumi matatu nemashanu mushure mekugamuchira dhipoziti.
Stove Keturu Tsananguro
Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd inotarisa pakugadzira zvitofu zvematende kwemakore gumi nemashanu muChina. Kuenderera mberi kuunzwa kwemidziyo mitsva uye tekinoroji, ine tarenda rakanakisa rekuvandudza nekutsvaga. Tinogona kupa ODM, OEM sevhisi.
Yakagadzirirwa chaizvo yedu inotakurika yemisasa yehuni Burning Tent Stove, inokwana mahetera mazhinji. Tank Yemvura inogadzirwa kubva ku304 simbi isina chinhu uye inopa mvura inopisa pazvinodiwa. Yakagadzirirwa kugara kumashure kweanobika kumusoro uye kutenderedza hwaro hwepombi chitofu pombi panopisa kupisa, chitofu ketera inokwana kusvika maviri akasiyana emvura emvura ayo anogona kufashaidzwa mumaminetsi apo chitofu chiri kupisa. Iyo yakasanganiswa spigot inoita kuti huni mvura hita ive nyore kuzadza yako mug kana yekushambidza bheseni. Kunyangwe iwe uri kungoita mukombe wetii kana kusungunuka kwechando uye chando chemvura yekunwa, tangi remvura inopisa rinogona kukwidziridza yako musasa nyaradzo kune imwe nhanho.
Kukura: 300 x 300 x 425 mm
Kukura Kwekutakura: 310 x 310 x 440 mm
Inokodzera 100mm flue pombi
Zvadaro: Inotakurika 12 Volt Ovhiti Yekubheka
Camping Stove Mvura Tangi
Musasa Wood Hita
Camping Wood Chitofu Tende
Tende Chitofu Mvura Tangi
Stainless Simbi Grill Yekubika
45 Degrees Canvas Tende Chitofu Jack
Carbon Simbi Flue Dampener YeTende
Camping Stove Square Kettle Inokodzera Chimiro
Yakasimba Takura Bhegi Yekutakurika Chitofu
Chimney Flashing Kit Yekupenya Tende
Stainless simbi chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Tende Wood Inopisa Chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa, Musasa Wood Burner, Bindu Kubika Chitofu,